Abashicileli Bavumela Abakwa-Adtech Babulale Izinzuzo Zabo | Martech Zone
Iwebhu iyindlela enamandla kakhulu yokuqamba eyake yaba khona. Ngakho-ke uma kukhulunywa ngokukhangisa kwedijithali, ubuciko kufanele bungabi namingcele. Umshicileli, ngokomqondo, kufanele akwazi ukuhlukanisa ngokuphelele imithombo yezindaba yakhe kwabanye abamemezeli ukuze athole ukuthengisa okuqondile futhi ahambise umthelela nokusebenza okungenakuqhathaniswa kozakwethu. Kepha abenzi - ngoba bagxile kulokho i-tech tech ethi abashicileli kufanele bazenze, hhayi izinto abangazenza empeleni.
Cabanga ngento elula njengesikhangiso sakudala samagazini esicwebezelayo. Uwathatha kanjani amandla wesikhangiso esigcwele ikhasi eligcwele, elicwebezelayo bese uletha lolo lwazi olufanayo ukukhombisa ukukhangisa? Kungenzeka azikho izindlela eziningi zokwenza lokho ngaphakathi kwemingcele ye- Amayunithi esikhangiso ajwayelekile, Ngokwesibonelo.
I-Ad tech iguqule ukuthengwa nokuthengiswa kwezikhangiso kule minyaka eyishumi edlule. Amapulatifomu wohlelo enze ukumaketha kwedijithali esikalini kube lula kunanini ngaphambili. Lokho sekukhuphukile, ikakhulukazi ama-ejensi nomugqa waphansi wesikhangiso. Kepha kule nqubo, kunqamule ubuciko obuningi nomthelela imikhankaso yokukhangisa ebidume ngayo ngaphambili. Ungafaka kuphela amandla okwenza uphawu ongaka kunxande ophakathi noma kubhodi yabaphambili.
Ukuze uhambise imikhankaso yedijithali esikalini, i-tech tech ithembele kuzithako ezimbili ezibucayi: ukulinganisa kanye nokuthengiswa kwempahla. Kokubili kuvimbela ukusebenza nobuciko bokukhangisa kwedijithali. Ngokusebenzisa izindinganiso eziqinile ngosayizi wokudala nezinye izinto ezibalulekile, i-tech tech isiza imikhankaso yedijithali kuwebhu evulekile. Lokhu kungenisa ukwethulwa kwempahla kwempahla yokubonisa. Ngokombono womkhiqizo, konke okusetshenziswayo kucishe kufane, ukukhuphuka kokunikezwa nokuthola imali yomshicileli oshayelayo kunciphile.
Isithiyo esiphansi sokungena esikhaleni sokushicilela kwedijithali kuholele ekuqhumeni kwempahla yedijithali, okwenza kube nzima kakhulu ukuthi imikhiqizo ihlukanise phakathi kwabashicileli. Amasayithi wezindaba zasendaweni, amasayithi e-B2B, amasayithi we-niche, kanye namabhulogi ukuncintisana nezinkampani ezinkulu zemidiya wokukhangisa amadola. Ukuchithwa kwesikhangiso kusatshalaliswa mncane kakhulu, ikakhulukazi ngemuva kokuba abarhwebi bezwe bethathe ukuluma kwabo, kwenza kube nzima ngabashicileli be-niche nabancane ukuthi baphile - noma bengaba ngumkhiqizo ongcono, ohlosiwe kakhulu wohlobo oluthile lomkhiqizo.
Ngenkathi bemasha ku-lock-step nge-tech tech, abashicileli badele inzuzo enkulu ababenayo empini yokuthola imali yezikhangiso: Ukuzimela okuphelele kumawebhusayithi abo kanye nezinsiza zemidiya. Abashicileli abaningi abakwazi ukusho ngobuqotho ukuthi kukhona okuthile ngebhizinisi labo, ngaphandle kosayizi wababukeli babo nokugxilwe kokuqukethwe, okukuhlukanisayo.
Umehluko ubalulekile kunoma iyiphi impumelelo yebhizinisi yokuncintisana; ngaphandle kwawo, amathuba okusinda mancane. Lokhu kushiya izinto ezintathu ezibalulekile ukuthi bobabili abashicileli nabakhangisi bazicabangele.
Kuyohlale Kunesidingo Esibi Sokuthengisa Okuqondile - Uma imikhiqizo ifuna ukuletha imikhankaso enomthelela omkhulu ku-inthanethi, izodinga ukusebenza ngqo nomshicileli. Umshicileli ngamunye unamandla okusiza imikhankaso engeke nje yashushumbiswa kuyo yonke iwebhu evulekile. Izikhumba zesayithi, ama-pushdown, kanye okuqukethwe okushicilelwe ezinye zezindlela zobudlabha ezenzeka manje lokhu, kepha ukutholakala kwezinketho kuzokwanda nakanjani eminyakeni ezayo.
Abashicileli beSavvy Bazothola Izindlela Zokunweba Iminikelo Yobuciko - Abashicileli beSmart ngeke balinde imikhiqizo ukufaka imibono yemikhankaso enomthelela omkhulu. Bazocabangisisa ngemibono emisha ngemibono emisha, futhi bazothola izindlela zokuyisebenzisa kuma-kits nabezindaba zabo. Izindleko zalokhu kukhishwa komkhankaso ngokungangabazeki zizovela kuqala, kepha ngaphezu kwama-ROI aphezulu, izindleko zemikhankaso enjalo ekugcineni zizokwehliswa. Nomaphi lapho kunethuba lokunciphisa izindleko emakethe, umhlinzeki wesevisi ophazamisayo ekugcineni uzongenelela.
Abashicileli Nabakhangisi Bazothola Izindlela Zokuletha Imikhankaso Enomthelela Omkhulu Ngamanani Amancane - Akuwona wonke umshicileli noma umkhiqizo onesabelomali sokwenza imikhankaso yangokwezifiso. Lapho bekwenza, kungaba nezindleko zokuklama eziphakeme ngokungalindelekile nezentuthuko. Ngokuhamba kwesikhathi, izinkampani zezinkampani zangaphandle zizothola izindlela zokunciphisa lezo zinkinga ngokwakha izindlela zokudala ezingasetshenziswa eshalofini ezingathengwa ngabashicileli nabakhangisi ukuletha uhlobo lomthelela nokusebenza abazoba nzima ukukufeza ngenye indlela.
Ukuzidela Ukuzimela Ukukhothamela I-Adtech Isiphakamiso Esilahlekayo
Amanani wokuchofoza okuphezulu, i-ROI, nomthelela womkhiqizo konke kuthintwe kabi ukubekwa emthethweni kanye nokuthengiswa kwempahla okudingekayo ukwenza ukukhangisa kusebenze esikalini. Lokho kushiya amathuba amasha kubashicileli nakubakhangisi wokubuyisa ubuhlakani nempumelelo okwakungokwabo.
Abaxhasi be-tech tech ngokungangabazeki bazophikisa lokho Uhlelo lokukhangisa kokubili akunakugwemeka futhi kuyinto enhle kakhulu kubashicileli nakubakhangisi ngokufanayo ngoba kwehlisa izindleko zokuthengisa futhi kunikeze abamemezeli abaningi ucezu lukaphayi. Amazinga amane nje adingeka kwezobuchwepheshe ukwenza lokho kusebenze.
Akungabazeki ukuthi abashicileli (labo abasamile noma kunjalo), bangavuma ngenhliziyo yonke. Impumelelo ka-Adtech ibilokhu ishicilela ishwa. Kepha kuphuma kubo labashicileli abafanayo ukuthola izindlela zokuziphindisela ngokucabanga kabusha indlela yabo yokuthengisa izikhangiso.
Tags: imikhankaso yezikhangisochitha isikhangisoamayunithi wezikhangisoukunamathelaabakhangisiubuchwepheshe bokukhangisaIABUhlelo lokukhangisaosayizi bezikhangiso abajwayelekileosayizi bokukhangisa abajwayelekile